Яндекс.Транспорт 6.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Яндекс.Транспорт
Яндекс.Транспорт ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်တစ်ဦးကိုခစျြတစျနေရာတစ်ဦးကအဆင်ပြေလမ်း - သည်သင်တို့နေရာနေပါစေ, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အလုပ်မှအများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ဖို့လျှောက်လွှာ။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တက္ကစီသို့မဟုတ်ခြေလျင်နေဖြင့်လမ်းကြောင်းများတည်ဆောက်စေ။ လမ်းပေါ်မှာအချိန်ကိုမျှော်လင့်နှင့်သင့်ဘတ်စ်ကားစီး, လမ်းရထား, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားဘယ်မှာကြည့်ပါ။ တစ်မှတ်တိုင်သို့မဟုတ်နှိုးစက်နာရီ built-in ကိုကူညီမယ့်အစားထိုးလက်လွတ်မနေပါနဲ့။ သင်ဘီးနောက်ကွယ်မှဖြစ်လိုပါကလျှောက်လွှာမြေပုံရပ်ထားကားများနှင့် karsheringa velostantsii အပေါ်ပြသထားတယ်။
အဆိုပါတပ်မက်လိုချင်သောအသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - အကြိုက်ဆုံး
ဒီ app တိကျသောဘတ်စ်ကား, trolleybuses, လမ်းရထားနှင့်တက္ကစီအောက်မေ့ - သင် re-ကိုကြည့်သူတို့ရဲ့ဒေတာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျကိုသာလိုအပ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကြည့်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့မှတ်တိုင်ကိုရှာဖွေ, မြေပုံကနေအပေါငျးတို့သပိုလျှံဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိအမြေပုံပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းကြည့်ရှုရန်မည်သည့်ဘတ်စ်ကား၏တံဆိပ်သို့မဟုတ်လမ်းရထားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ app ယာဉ်များမှန်ကန်သောရပ်တန့်အချိန်တွင်ဆိုက်ရောက်လာသောအခါသင်သိပါစေပါလိမ့်မယ်။
လိုချင်သောမြေယာလမ်းကြောင်း, အဆင်ပြေမြေအောက်ရထားဘူတာရုံသို့မဟုတ် MSc ၏အနီးဆုံးမှတ်တိုင်ကိုရှာဖွေ, ဆိုက်လမ်းညွှန်ကူညီပေးဖို့အသေးစိတ်မြို့မြေပုံ။
Karshering နှင့် velostantsii
မြေပုံကားများဝန်ဆောင်မှုများကို karsheringa « Drive ကို» Belka မော်တော်ကားနှင့် velostantsii "Velobayk" ပြသထားတယ်။
လမ်းညွန် ကားမောင်း Build
သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရရန်, သင်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဘွဲ့နာမတော်ကိုရှာဖွေမြေပုံတစ်ခုအပေါ်တစ်ဦးပွိုင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Modes သာမဆိုငျသညျကိုက်ညီမပါဘူးဆိုရင် - ထို setting များကိုထဲတွင် filter များ အသုံးပြု. ကြောင့်ကို turn off အပေါင်းတို့နှင့်တကွအသစ်သောလမ်းကြောင်းမှသာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတညျဆောကျပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ application ကိုမော်စကို, စိန့်ပီတာစဘတ်, Yekaterinburg, Novosibirsk, ကာဇန်, Nizhny Novgorod နှင့် Rostov-on-Don နှင့်အခြားအဓိကရုရှားမြို့ကြီးများကိုရပ်တန့်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တစ်ကဒ်ရှိပါတယ်။ Yandeks.Transport လည်း Astana နှင့်ဘီလာရုစ်၏မြို့ကြီးများ (Baranovichi, Slutsk, Lida နှင့် Bobruisk, Pinsk, Grodno, Vitebsk, Mogilev နှင့် Minsk) တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Яндекс.Транспорт အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Яндекс.Транспорт အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Яндекс.Транспорт အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Яндекс.Транспорт အား အခ်က္ျပပါ
legioner649 စတိုး 1 1.37k
Яндекс.Транспорт ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Яндекс.Транспорт အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.1
Release date: 2019-09-02 07:49:47
Яндекс.Транспорт APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ